Vaovao - Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana kaopy mihetsiketsika?
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fampiasana kaopy mihetsiketsika?
Ny Aircraft Cup dia vokatra ara-pananahana malaza ho an'ny lehilahy ary afaka mamaly ny filan'izy ireo amin'ny filokana. Nefa mihamaro ny olona te hahalala raha manimba ny fahasalaman'ny olona izany?
Ireo fitaovana ampiasaina hanamboarana ireo kaopy mihetsiketsika dia natao indrindra amin'ny silika malefaka tsy misy poizina, miaraka amin'ny halemem-panahy antonony ary famolavolana anatiny antonony. Izy io dia namboarina mifanaraka amin'ny firafitry ny tena olona, ​​izay afaka soloina vehivavy tanteraka. Ary tery ny firafitra anatiny ao anaty kaopin'ny masturbation, mitovy amin'ny toeran'ny vehivavy. Rehefa mampiasa azy io, dia manakaiky ny fahatsapana amin'ny olona tena izy, izay nanatsara ny kalitaon'ny filokana. Ka raha mbola ampiasanao amin'ny alàlan'ny fomba torolàlana momba ny torolàlana sy ampiasaina amin'ny fitandremana dia tsy hanimba ny vatan'olombelona izany. Amin'izao manaraka izao dia azonao atao ny mahita ny tombony azo avy amin'ny fampiasana kaopy mihetsiketsika.
1, ny fampiasana marina ny kaopy mihetsiketsika dia tsy hahatonga anao hiharan-doza, ary tsy mila miahiahy ny fitondrana vohoka ny zazavavy sy ny olana hafa. Ny kilalao anao manokana no mahatonga anao hibodo sy hanimba ny sitraponao.
2, Tsy mila manahy momba ny fihetseham-pon'ny antsasaky ny iray hafa ianao, na ny fahaizanao manokana, ny kapoaka mihetsiketsika manome anao fahafinaretana habaka manokana.
3, na irery ianao, na ny antsasaky ny iray hafa dia tsy mety ny miara-miasa, ny kapoaky ny filokana dia mety mifanaraka amin'izay ilainao foana. Mora ny mitondra sy miafina. Rehefa mandeha dia azo entina ihany koa ka indraindray.
4, ny filan'ny nofo dia toetra maha-olombelona mahazatra, saingy matetika miteraka olana maro, toy ny fisolokiana, famadihana, fandaniana vola, ahazoana aretina sy korontana ara-tsosialy. Ny kaopy fiaramanidina dia afaka manala ny filan'ny nofo amin'ny fomba azo antoka, misoroka ny lesoka natao rehefa mieritreritra ao amin'ny vatana ambany ianao, mba hahafahanao mieritreritra am-pitoniana any am-piasana.
5, kaopy fiaramanidina dia azo ampiasaina miaraka amin'ny antsasany hafa mba hampitomboana ny fahafinaretana amin'ny firaisana ara-nofo, maro ny fanandraman'ny vehivavy namana dia mampiseho fa ny kaopy amin'ny fiaramanidina dia afaka manampy azy ireo hahatakatra ny fihetsika ara-batana sy ara-psikolojian'ny vadiny, hanao firaisana mirindra kokoa, fa mandritra ny vanim-potoana ara-batana sy fitondrana vohoka koa. fe-potoana hanomezana izay ilain'ny antsasany hafa, ka vehivavy sakaiza maro koa no hividy kaopy fiaramanidina ahazoana aina kokoa ho an'ny vadiny.
Fotoana fandefasana: Sep-23-2020